”Ma waareen haddii Milan la ii dhiibi lahaa, in Sacchi la igu misaalana meel ka dhac ayay isaga ku tahay!” – Sarri – Gool FM
”Ma waareen haddii Milan la ii dhiibi lahaa, in Sacchi la igu misaalana meel ka dhac ayay isaga ku tahay!” – Sarri
Raage October 9, 2017
(Napoli) 09 Okt 2017 – Macallinka Napoli ee Maurizio Sarri ayaa saadiyay “inuusan waari lahayn” haddii 2015-kii loo magacaabi lahaa macallinka AC Milan.
Macallinka SSC Napoli ayaa waxaa xagaagii 2015 doonaysay kooxda Rossoneri, balse waxay markii dambe qaateen Sinisa Mihajlovic halka Sarri uu aadey Napoli.
Filasuufka kubadda cagta Talyaaniga ee Arrigo Sacchi ayaa sheegay inuu Silvio Berlusconi kula taliyay inuu macallin ka dhigto ninka reer Tuscania, balse 58-jirkani ma hubo inuu ku ag waari lahaa il Cavaliere.
“Kuma ag waareen haddii ay run tahay sheekada laga sheegayo ee ah inuu farageliyo shaqooyinka macallinka, balse maaddaama uu wax badan ku guulaystey waxay ila tahay inuu warkaasi been yahay,” ayuu Sarri u sheegay Gazzetta dello Sport.
Sarri ayaa dabcan la barbardhigaa Sacchi laftiisa, balse wuxuu muujinayaa inuusan taa u arkin mid ku habboon Sacchi.
“Haddaad i waydiiso, isbarbardhiggaasi waa meel ka dhacn lala doontay Arrigo oo wax kasta ku guulaystey, halka aanan anigu waxba ku guulaysanin.” ayuu qabaa Sarri.
“Aniga hal abuurkaygu waa nus, kiisu wuxuu ahaa mid buuxa, wuxuu qoray taariikh kubadeed, xitaa xiisaha aan u hayo taatikada ciyaarta waxaan ka tix raacaa isaga, marka uma dhigmo isaga.” ayuu kusoo gaabiyay.
DAAWO: Tababaraha xulka qaranka Costa Rica oo fuliyay balan uu ka qaaday taageerayaasha
''Marar badan baan ku xanaaqaa Gonzalo Higuain'' - Max Allegri